Madaxweyne Farmaajo oo Shaqaaqadii Dhex martay Ciidamada Gudi u saaray - Hablaha Media Network
Madaxweyne Farmaajo oo Shaqaaqadii Dhex martay Ciidamada Gudi u saaray
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay shir deg deg ah isugu yeeray Hey’addaha ammaanka dowladda, kaasoo looga hadlayay shaqaaqadii sababtay dhimasho iyo dhaawac ee shalay dhex martay Ciidamada dowladda.
Waxaa uu sheegay in howlihii socday ee howl galada Ciidamada Xasilinta aanu saameyn doonin, lana xoojin doono, waxaa uu tilmaamay in howl galada la gaarsiin doono deegaan aan horay la tagin, ciidamadana ay walaalo yihiin hal cadawna leeyihiin.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ammaanay Ciidamada Xasilinta, isagoo xusay inay garab taagan yihiin, waxaa uu tilmaamay in meydka uu xurmo mudan yahay, isagoo ku baaqay in sawirada la soo gelinayo baraha bulshada ee meydka askarta laga saaro
Wasiirka Amniga gudaha Maxamed Islow Ducaale ayaa sheegay in Ciidamada xasilinta ay howlahooda sii wadayaan, isla markaana aanay shacabka niyad jebi doonin dhacdadan, waxaa uu xusay in shaqaadaqadan aysan raali ka aheyn, balse ay aheyd qadar dhacday, isagoo xusay in ciidamadii ku lugta lahaa ee xiran sharciga la horkeeni doono.
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed Jen, C/xakiin Daahir Saciid ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in cilado yar oo dhacay tilmaamo qaldan laga bixiyo, isagoo tilmaamay in wixii dhacay shalay ay dad fara badan u xir xiran yihiin, wixii baaritaan ee la sameynaya ay hoggaamin doonaan ciidanka booliska, sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horgeyn doono cid walba oo ku xadgudubtay sharciga.
Shaqaaqadii shalay dhex martay Ciidamada dowladda ayaa aheyd mid khal khal iyo saameyn amni reebtay, iyadoo dhowr goobood oo magaalada ka mid ahna ay ka dhaceen iska hor imaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Hey’addaha ammaanka ayaa sheegay in wixii shalay dhacay aysan marnaba saameyn ku yeelan doonin howl galadii ka socday caasimadda.